Abka Ugufiican Ee Loogu Heli Karo Macaamiisha Youtube ▷ ➡️ Kuwa Raaca ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 648
Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa wax ka baranaya suurtagalnimada samaynta kanaal iyaga u gaar ah oo YouTube ah oo bilaw inaad lacag ku samayso barnaamijkan. Hadday taasi tahay kiiskaaga, aan kuu sheegno inaad u baahan tahay caawimaadda macaamiisha. Taasi waa sababta maanta aan kuu tusineyno waxyaabo kale oo aad ku heli karto taageerayaal cusub YouTube-ka.
Macaamiisha ayaa fure u ah YouTube-ka. Barxadku wuxuu u baahan yahay tiro ugu yar oo raacsan si ay awood ugu yeeshaan inay lacag ka helaan kanaalkayaga oo markaa ay bilaabaan inay lacag ku kasbadaan abuuritaanka waxyaabaha maqalka ah. Waxaa jira codsiyo qaarkood oo naga caawin kara helitaanka macaamiisha halkanna waxaan kuu sheegeynaa kuwa ugu fiican.
Kordhinta YouTube-ka ma sahlana
Dad badan oo adeegsada barmaamijka YouTube-ka waxay lacag ku helayaan uun iyagoo u soo gelinaya codsigan codsigan, hase yeeshe, hal shay waa in si cad loo caddeeyo waana kororka YouTube-ka ma sahlana sida dadka qaarkii aamin san yihiin.
Si loogu daro macaamiisha cusub kanaalkayaga waxaa lagama maarmaan noqon doonta in waqti badan la geliyo barxadda dhexdeedaLaakiin qof walbaa awood uma leh inuu saacado ku qaato sameynta waxyaabaha ku jira barnaamijka. Xaaladahan oo kale caawimaad dheeri ah ma xuma.
Taasi waa sababta maanta aan rabno inaan kuu soo bandhigno qaar ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan ee lagu kasban karo macaamiisha Youtube. Iyagu hawsha oo dhan innoo qaban maayaan, laakiin way naga caawin doonaan inaan ka dhigno hawsha ku darista kuwa raacsan mid aan dhib iyo caajis badan lahayn.
Shabakadda waxaan ka helnaa liis ballaaran oo codsiyo ah oo loogu talagalay inay ku helaan macaamiisha YouTube. Waxaa jira qaar si wax ku ool ah oo la isku halleyn karo ah, halka qaar kalena ay sameeyaan ballanqaadyo been ah.
Waxaan kuu keenay dusha sare leh codsiyada ugu fiican si aad uhesho kuwa raacsan Youtube. Xusuusnow oo ka faa'iideyso qalabkan cajiibka ah.
Mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee kaa caawin kara inaad ka hesho macaamiil cusub YouTube-ka waa sax TubeMine. Qalabkan waxaad ku awood u yeelan doontaa inaad siiso koror aad u weyn kanaalkaaga, tan ugu wanaagsanna waxay tahay inay noqon doonto waqti aad u gaaban.
Muhiim ma noqon doonto in la iibsado kuwa raacsan. Habka hawlgalka ee codsigan badanaa wuxuu ka kooban yahay nala wadaag fiidiyowyadeena kuwa ka tirsan beeshan. Haddii aan rabno inaan wadaagno fiidiyoow waxaan u baahan doonnaa "qadaadiic" aad ka iibsan karto ama ka heli karto adigoo daawanaya fiidyowyada isticmaaleyaasha kale ee barnaamijka.
Codsigan cajiibka ah kama maqnaan karin liistadayada. Waad ku mahadsan tahay, waxaan ku guuleysan doonnaa macaamiil dheeri ah, jecel iyo aragtiyo ballaaran oo ka dhex jira barta YouTube.
Waxay u shaqeysaa si fudud: Waxaad gelineysaa fiidiyoow, nuqul ka sameysaa xiriiriyaha barnaamijka oo waxaad abuurtaa dhiirrigelin si aad u soo jiito dareenka isticmaalayaasha kale. Si tan loo sameeyo waxaad u baahan doontaa "qadaadiic" taas oo aad ku heli doontid adoo u kuurgalaya waxyaabaha isticmaalayaasha kale.
UTViews - Aragtida Kor u Qaadista
Halkan waxaan ku soo bandhigeynaa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu heli karo macaamiisha Youtube si fudud oo dhaqso leh. Codsigani wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah kuwa kale. Kaliya waxaad ubaahan doontaa inaad la wadaagto fiidiyahaaga barnaamijka isla markaana waxay ka caawin doonaan isticmaaleyaasha kale inay arkaan.
Waxaad sidoo kale sameyn doontaa ubaahantahay qadaadiic inaad ku isticmaasho arjiga. Waxaad kuhelaysaa abaalmarinta noocan ah adoo u fiirsanaya waxyaabaha ay isticmaaleyaasha kale u soo geliyaan barxadda.
1 Kordhinta YouTube-ka ma sahlana
2.3 UTViews - Aragtida Kor u Qaadista